ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခံရတဲ့ အရုပ်ကျွန်း - Thutazone
ပြီးနောက် ထို အရုပ်ကို ကျွန်းပေါ်ရှိ သစ်ပင် တစ်ပင် ပေါ် ချိတ်ထားပြီး သေဆုံး သွားတဲ့ မိန်းကလေးငယ် ကျေနပ်အောင် ဆိုပြီး ချိတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။ ထိုနေ့ က စပြီး Barrera ရဲ့ ခြောက်ခြားမှုတွေ ဟာ အတော်အတန် ပြေလျော့ လာခဲ့ တာကြောင့် သူ ဟာ မိန်းကလေးငယ် ရဲ့ဝိဉာည် ပိုမို ကျေနပ်မှု့ရအောင် အရုပ်တွေ ကို ထပ်မံ ရှာဖွေပြီး ချိတ်ဖို့ ကြိုးစား လာခဲ့ ပါတယ်။
Barrera ရဲ့ အရုပ် စုဆောင်း ချိတ်ဆွဲခြင်း အကျင့်ထူး ဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ အကြာ မှာ ရပ်တန့် သွားခဲ့ရ ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Barrera ရဲ့ ရုပ်အလောင်း ကိုလည်း ယခင် Barrera ပြောခဲ့ ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးငယ် ရေနစ် သေဆုံး ခဲ့တဲ့ နေရာ မှာပဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ရတာ ကြောင့် ဖြစ် ပါတယ်။ ဒေသခံတွေ ရဲ့ အဆိုအရ Barrera ရဲ့ ဝိဉာည် ဟာ မိန်းကလေးငယ်လေး ရဲ့ ဝိဉာည် နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ထို ကျွန်းပေါ်မှာ ဆက်လက် ရှိနေတယ် လို့ ယုံကြည် နေကြ ပါတယ်။
Barrera မကယ်နိုင် လိုက်တဲ့ မိန်းကလေး ဟာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါလဲ ?
Barrera က ဘာ ရည်ရွယ်ချက် တွေနဲ့ ကျွန်း တစ်ခုလုံး ကို အရုပ်တွေ ပြည့်နေ စေခဲ့ တာလဲ ?
Barrera ကိုယ်တိုင် ကကော ဘယ်လို နည်း နဲ့ ရေနစ် သေဆုံး နေရ တာလဲ ? သူ သေဆုံးမှု့ ကလည်း တိုက်ဆိုင်မှု့သက်သက်လား ?
သို့မဟုတ် သေဆုံးသွားတဲ့ မိန်းကလေး ရဲ့ ဝိဉာည် ကို သွားရောက် စောင့်ရှောက်ဖို့ သက်သက်လား ?
ဆိုတာ တွေ ကတော့ Don Julian Santana Barrera မှာ့ လွဲလို့ ဖြေရှင်း မရသေးတဲ့ ပဟေဋ္ဌိ တစ်ခု အနေ နဲ့ ကျန်ရှိ နေဦး မှာ ဖြစ်ပါတယ်…….